ချော က လက် မာ ယာ – Grab Love Story
ကလင် ကလင် ကလင်…. စက်ဘီးဘဲလ်သံကြားလို့ ဒေါ်ကျော့ခိုင်ခေါင်းလေးမော့ကြည့်မိသည်။ “အန်တီရေ ဇွဲမာန်ရှိလား” “ရှိတယ် သမီးရေ အပေါ်ထပ်မှာ ပစ္စည်းတွေထည့်နေတယ် သားရေ အောက်ဆင်းခဲ့ဦး ဒီမှာ အေးမြလေး ရောက်နေတယ်” “ဟုတ် လာပြီ အမေရေ” အမေ့ကို အသံလှမ်းပြုရင်း စာအုပ်တချို့ကို သေတ္တာထဲထည့်ပြီး အောက်ထပ်သို့ဆင်းလာခဲ့သည်။ “အေးမြ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဘာလဲဟ” “နင်မနက်ဖန်ကျောင်းသွားတော့မှာလေ အဲ့ဒါငါ့ကို မုန့်လိုက်ကျွေးဦး” “ဟာ…နင်ကလည်း ပစ္စည်းတွေသိမ်းလို့မပြီးသေးဘူးဟ” “လာပါဟာ ငါလွမ်းနေရမှာ ခဏလေး တနေရာသွားထိုင်ရအောင်ဟာနော် လာပါ ဇွဲမာန်ရာ” ချစ်သူရဲ့ အသံတိမ်ဝင်သွားပြီး မျက်ရည်လေးတွေဝိုင်းလာတော့ ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့ပြီ။ “အမေရေ သား အေးမြနဲ့ အပြင်ခဏသွားဦးမယ် ” “အေး အေး အရမ်းမကြာနဲ့နော် လုပ်စရာတွေရှိသေးတယ်” “ဟုတ် မေမေ… လာ နင့်စက်ဘီးနဲ့ပဲသွားရအောင် ငါ့ဘီးထုတ်မနေတော့ဘူး” စက်ဘီးလေးနင်းထွက်လာတော့ ချစ်သူလေးက ခါးလေးဖက်ပြီး ကျောပြင်ကို ပါးလေးအပ်ကာ ငြိမ်၍ လိုက်လာသည်။ “အေးမြ နင်ဘာစားမှာလဲ” “ဘာမှမစားဘူးဟာ. ငါဖက်ထားချင်တယ် ဒီလိုလေး ငါလွမ်းနေရမှာသိလား နင်က မနက်ဖန်ညနေဆိုသွားပြီ ငါတို့ကျောင်းက နောက်လကုန်လောက်မှတဲ့ ငါလွမ်းနေမှာ” ပြောရင်း တသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငိုနေသော ချစ်သူလေးကြောင့် ရင်ထဲဆို့နင့်လာသည်။
၁၀ တန်းအောင်စာရင်းတွေထွက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်အသီးသီးကို သွားရောက်ကြရမည့် ချစ်သူနှစ်ဦး၏ နှုတ်ဆက်ချိန်။ အတွေ့ကြုံသစ်တွေကို ရင်ခုန်မျှော်လင့်ရင်း ချစ်သူလေးကိုလည်း သနားမိပြန်သည်။ ” အေးမြ ငါတို့ဘယ်သွားကြမလဲ” ” ချစ်သူများနေ့က ငါတို့ ချောကလက်ထိုင်စားခဲ့တဲ့နေရာသွားမယ်လေ ငါ့မှာချောကလက်ပါတယ် နင့်ကိုကျွေးချင်လို့ ” ခါးကိုတင်းတင်းဖက်ပြီးပြောလာသော အေးမြစကားကြောင့် ရင်ထဲလှိုက်သွားသည်။ ၁၀မိနစ်လောက်စက်ဘီးနင်းလာပြီး ထင်းရူးတောစပ်နားရောက်တော့ ကုန်းစောင်းလေးနားမှာစက်ဘီးရပ်လိုက်ပြီး ထိုင်စရာရှာကြသည်။ “အေးမြ နင်ငိုမနေနဲ့လေ” “ဟာ..ငိုချင်နေတာကို ငိုမှာပဲ” “ဘယ်မှာလဲ ချောကလက် ဟိုနားလေး သွားထိုင်စားရအောင်” ထင်ရှူးပင်ကြီး၏ အောက်ခြေတွင် ထင်းရှူးဆီထုတ်ထားသောကြောင့် အပင်၏ ပင်စည်မှာ ခွက်ကြီးဖြစ်နေပြီး မြေအနည်းငယ်နိမ့်သဖြင့် တော်ရုံ မမြင်နိုင်သောနေရာလေးကို ရွေးလိုက်သည်။ “လာ အေးမြ အပင်သွားမမှီနဲ့ အကျီတွေမဲကုန်မယ်” “အင်းပါ” မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး ချောကလက်လေးခွံ့ကျွေးရင်း မျက်ရည်ကျနေသော ချစ်သူလေးကို ဆွဲပွေ့လိုက်ပြီး နဖူးလေးနမ်းရင်း မျက်ရည်တွေ သုတ်ပေးနေလိုက်သည်။
ချော့စရာ စကားရှာမရ။ “မငိုပါနဲ့အေးမြရယ် ကျောင်းမတူပေမယ့် ပိတ်ရက်ကျပြန်တွေ့ရမှာပဲ” ချော့မရ အေးမြက ငိုနေတုန်း ကြံမိကြံရာနှင့် အေးမြလက်ထဲက ချောကလက်ကို ကိုက်ပြီးအေးမြမျက်နှာလေးဆွဲမော့ကာ ခွံ့ကျွေးလိုက်သည်။ ထိုချောကလက်အပိုင်းလေးကုန်သည်အထိ ပါးစပ်နှင့်ခွံ့ကျွေးပြီး သေးသေးလေးသာ ကျန်တော့သဖြင့် အေးမြပါးစပ်ထဲ လျှာနှင့်ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်။ အေးမြရဲ့ ဝင်သက်ထွက်သက်တို့က ပါးပြင်မှာ ရိုက်ခတ်လျက်။ အေးမြလည်း ချောကလက်ကို ဖမ်းယူရင်း လျှာကိုလည်း စွဲစုပ်လိုက်သည်။ ကျနော်လည်းအေးမြရဲ့အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်နမ်းလိုက်ရင်း ခါးလေးဖက်ကာ အေးမြကိုယ်လုံးလေးကို ဆွဲယူလိုက်တော့ အလိုက်သင့်လေးလှဲချလာသည်။ အေးမြဖင်လေးကိုကိုင်ပြီးပွတ်ရင်းမျက်နှာကို အနမ်းများဆက်တိုက်ချွေကာ ချစ်သူရဲ့မျက်ရည်တွေကိုနှစ်သိမ့်စေတော့သည်။ အေးမြရဲ့ အကျီကြယ်သီးတွေကိုဖြုတ်တော့ မျက်လုံးဝိုင်းလေးနှင့်ငြိမ်ပြီး ကြည့်နေသည်။ အတွင်းခံအကျီချိတ်တွေ ဖြုတ်မနေတော့ပဲ အပေါ်သို့လှန်တင်ကာ ဖွံ့ထွားကာစ နို့လေးတွေကို တလှည့်စီစို့ရင်း နို့အုံတွေကို ဆုပ်ချေပေးလိုက်သည်။အောက်က ဖွားဖက်တော်ကလည်း အေးမြရဲ့ နံကြားကိုထောက်ပြီး တင်းနေပြီ။ အေးမြရဲ့လက်ကိုယူပြီး ကိုင်ခိုင်းတော့ ငြင်းသည်။
“အာ..မကိုင်ဘူး ငါကြောက်တယ် ဒီတိုင်းပဲနေဟာ” “ဟာ..အေးမြကလည်း ကိုင်ထားပါဆို” “မကိုင်ဘူးလို့ နင့်ကိုဖက်ထားမယ် နော်” ပြောရင်း လည်ပင်းကိုဖက်ပြီး သူ့ရဲ့နို့တွေပေါ်ဆွဲချတော့ ငုံပြီးစို့ရင်း စကပ်ရဲ့ဇစ်ကို စမ်းကာအောက်သို့ ဆွဲချတော့ သူမ အကြောက်အကန် ငြင်းတော့သည်။ “မလုပ်နဲ့ ဇွဲမာန် ဒါတော့မလုပ်နဲ့ဟာ ငါကြောက်တယ်” “ဘာကြောက်တာလဲဟ နင်ကလည်း” “မသိဘူး ကြောက်တယ်ဟာ ငါ့ကိုချစ်ရင် မလုပ်နဲ့နော်” “မလုပ်ဘူးကွာ ဒီတိုင်းပဲ ကိုင်ထားမယ်နော် ချွတ်လိုက် ” “အကုန်မချွတ်ဘူး နင့်လက်ထည့်လိုက်” “ပြီးရော” အေးမြရဲ့နှုတ်ခမ်းတွေကို ပြန်နမ်းရင်း လက်တွေက စကပ်အောက်မှ ဖင်လုံးလေးကို အတွင်းခံပေါ်ကနေ ဆုပ်ကိုင်ပြီး ပေါင်ကြားထဲသို့ လက်ညိုးလေးဖြင့် မထိတထိ ပွတ်ပေးနေလိုက်သည်။ အေးမြလည်း ကျနော့လည်ပင်းကို အတင်းဖက်ရင်း ပခုံးပေါ့သို့ မျက်နှာလေးအပ်ကာ တအင်းအင်းနှင့်။ ကျနော်လည်း လက်ကို အရှေ့ဖက်သို့ပြောင်းလိုက်ပြီး “အေးမြ ပေါင်နဲနဲကားကွာ” နား နားလေးကပ်ပြီးလေသံလေးနှင့်ပြောလိုက်သည်။ ပေါင်လေးနဲနဲကားပေးတော့ အတွင်းခံထဲ လက်နှိုက်ရန်ပြင်လိုက်စဉ် အေးမြလက်က ကျနော့လက်ကိုဖမ်းပြီး တားဆီးထားကာ ကျနော့ နှုတ်ခမ်းတွေကိုနမ်းရင်း ခေါင်းသာခါနေသည်။ “အေးပါ အထဲကမကိုင်ဘူး အပြင်ကပဲ ကိုင်တော့မယ် လွှတ်နော်” လို့ပြောလိုက်တော့မှပဲ ကျနော်လက်ကိုလွှတ်ပြီး လည်ပင်းကို ပြန်ဖက်လိုက်သည်။ နှုတ်ခမ်းကိုတော့ နမ်းနေဆဲ။ ကျနော်လည်း ဘောင်းဘီပေါ်ကနေ အေးမြအဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးနေရင်း ဘောင်းဘီလေးစိုထိုင်းလာတာကို သတိထားမိနေသည်။
ပေါင်ကြားထဲ လက်အသာထိုးထည့်ရင်း ဘောင်းဘီဘေးကမျှော့ကြိုးလေးကို ဘေးကပ်ကာ အရည်တွေတစိမ့်စိမ့်ထွက်နေသော အေးမြရဲ့ အမွှေးနုနုနှင့် အဖုတ်လေးကို ပွတ်ပေးရင်းနဲ့ နို့တွေစို့လိုက်သည်။ ဘယ်လောက်မှမကြာလိုက် အေးမြတယောက် ကျနော့ခေါင်းကိုဆွဲမပြီး နှုတ်ခမ်းတွေကို အတင်းနမ်းကာ အဖုတ်လေး ပွစိပွစိဖြစ်ပြီး သက်ပြင်းချကာ ငြိမ်ပြီး ကျနော့ကို အတင်းဖက်ထားတော့သည်။ ” အေးမြ အေးမြ နင့်အရည်တွေ ထပ်ထွက်လာတယ်ဟ” “အာ…ဘာတွေပြောနေတာလဲ ရှက်စရာကြီးဟာ” “ထဦး ဒီမှာကြည့်လို့” “မကြည့်ဘူး” ကျနော့ရင်ထဲ မျက်နှာ အတင်းထိုးထည့်ကာ အရှက်သည်းနေသော ချစ်သူလေးအား ဆံပင်များကို ငုံ့နမ်းပြီး အရှက်ပြေစေရန် ကြိုးပမ်းပေးရပြန်သည်။ ကျနော့လီးကတော့ တင်းသထက်တင်းလျက်ပေါ့။ ဒီတိုင်းငြိမ်နေကြရင်း ၅ မိနစ်ခန့်ကြာတော့ “ဇွဲမာန် ဖယ်ပေးဦး ဟိုဘက်လှည့်နေ” “ဘယ်လိုဖယ်ရမှာလဲဟ နင်ထမှ ရမှာပေါ့” “အဲ့ဒါဆိုလည်း နင်မကြည့်နဲ့ မျက်စိမှိတ်ထား” “အင်း မကြည့်ဘူး” အေးမြလည်း ရင်ခွင်ထဲမှ ရုန်းထရင်း “ဟိုဘက်လှည့်နေနော် မကြည့်နဲ့” ” အေးပါဟာ မကြည့်ဘူး” “ရပြီ ပြန်လှည့်တော့” ကျနော်လည်း ပြန်လှည့်ရင်းနဲ့ “ကြည့်ရတော့မှာလား” လို့မေးလိုက်သည်။ “မသိဘူးကွာ” မျက်နှာလေးနီနီ ရှက်ပြုံးလေးနှင့် ရင်ထဲပြေးဝင်ဖက်လာသောချစ်သူလေးကို ဆီးပွေ့ရင်း ရောက်တတ်ရာရာ ချစ်စကားလေးများဖြင့် ထိုတညနေကုန်ဆုံးခဲ့ပြန်သည်။ အိမ်ပြန်လမ်းမှာ စကားမဆိုမိကြပဲ လက်ကလေးဆုပ်ကိုင်ရင်းနဲ့ ငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်စွာ။… ဒီနေ့ညဆို အိမ်နဲ့ခွဲပြီးအဝေးမှနေရတော့မှာပါလားဆိုတဲ့အသိနဲ့ ဝမ်းနည်းသလိုလိုနှင့် သားအမိနှစ်ယောက်ထိုင်စကားပြောနေစဉ် အေးမြထပ်ရောက်လာပြန်သည်။
“ဇွဲမာန်ရေ…” “ဟေ့ ငါရှိတယ် လာခဲ့” “သား ဒီနေ့ဘယ်သွားဦးမလို့လဲ မနေ့ကလည်းအကြာကြီးပဲ ဒီကောင်မလေးကလည်း လွန်တယ် ခရီးသွားခါနီးအထိ မပြောချင်တော့ဘူး” အမေလည်းပြောဆိုပြီးအိမ်နောက်ဘက်ထွကိသွားသည်။ အေးမြလည်းအခြေအနေရိပ်မိသည်ထင်သည်။ မျက်ရည်လေးလည်လည်နှင့် အနားကပ်ခါ “ဇွဲမာန် ငါဒီနေ့စိတ်တွေထိန်းမရလောက်တော့ဘူး သိလား” ရပြီ ဒီလောက်ဆို သဘောပေါက်ပြီ ကျနော်လည်း အမြန်ပင် “အမေ့ သား အေးမြကို အိမ်လိုက်ပို့လိုက်ဦးမယ်” “သား ကားဘယ်ချိန်လဲ အချိန်မီအောင်ပြန်ခဲ့” “ဟုတ်” စက်ဘီးပြေးထုတ်ရင်း “လာ အေးမြ သွားရအောင်” နှစ်ယောက်သားစက်ဘီးကိုယ်စီနင်းရင်း ထွက်လာစဉ် မိုးလေးကတဖွဲဖွဲ မိုးကလည်း အမှတ်တရနေ့ ကိုအားဖြည့်ပေးသည်ထင်သည်။ “ဇွဲမာန် အိမ်မှာ ဘယ်သူမှမရှိဘူး အိမ်သွားရအောင်” “အိုကေ ဘယ်သူအရင်ရောက်လည်း ပြိုင်မယ်လေ ” ပြောရင်း စက်ဘီးကိုဒုန်းနင်းပြေးတော့ အေးမြလည်းအားကျမခံ လိုက်နင်းရှာသည်။ စိတ်တွေက စောနေသည်လေ။ အိမ်ရှေ့ရောက်တော့ စက်ဘီးဒေါက်ထောက်ပြီး အေးမြဆီက အိမ်သော့ယူကာ ဖွင့်ဝင်လိုက်သည်။ အေးမြက တံခါးကို ကလန့်ပြန်ထိုးပြီး ကျနော့ဆီပြေးလာကာ ခါးကိုဖက်ပြီး ရင်ထဲ ငြိမ်နေသည်။ “အေးမြ နင်သေချာလား” ခေါင်းလေးငြိမ့်ပြီး အဖြေပြန်ပေးသည်။ ကျန်ာလည်း သူ့ရဲ့စိုရွှဲနေတဲ့အကျီကို ချွတ်ချလိုက်ပြီး နှုတ်ခမ်းကိုငုံနမ်းလိုက်သည်။
အေးမြလည်း အလိုက်သိစွာ လုံချည်ကို ဖြည်ချလိုက်ပြီး “ငါမနေ့က တနေကုန်နေမရဘူးဟာ ညလည်းအိပ်မပျော်လို့ နင့်ဆီ အရဲစွန့်ပြီးလိုက်လာတာ” “ငါသိတယ် အေးမြ ငါလည်းတူတူပဲ” သူမ ဖင်လေးတွေကိုင်ရင်း နမ်းရင်းနှင့် အေးမြလက်တွေက ကျနော့်ပုဆိုးကို ဆွဲဖြည်ချလိုက်သည်။ အိမ်နေရင်းနဲ့ထွက်လာတာမို့ အတွင်းခံဝတ်မထား လီးက တရမ်းရမ်းနှင့်ထွက်လာသည်။ ကျနော်လည်းအကျီချွတ်လိုက်ပြီး အေးမြရဲ့ဘရာစီယာကို ဆွဲလှန်မည်လုပ်တော့ အေးမြက ကျောလှည့်ပေးသဖြင့် ချိတ်များကိုဖြုတ်ပြီး နို့တွေကို လွတ်လပ်စွာ ငုံစို့လိုက်တော့သည်။ ဧည့်ခန်းထဲရှိထိုင်ခုံပေါ်တွင် ထိုင်ရင်း အေးမြက အပေါ်မှ ခွကာ သူမအဖုတ်ကို အတွင်းခံဘောင်းဘီပေါ်မှ ထိုးဆွရင်း နို့တွေကိုစို့လိုက် နှုတ်ခမ်းကိုနမ်းလိုက်နှင့်အလုပ်များလျက်ရှိတော့သည်။ အေးမြကို မတ်တပ်ရပ်ကာဘောင်းဘီလေးကို ချွတ်ချပေးရင်း အဖုတ်လေးကို ရွှတ်ခနဲနမ်းလိုက်သည်။ အမွှေးနုပါးပါးနှင့် ဖောင်းအိအိ စဖုတ်လေးက အရေလေးစိုစိစိ နှင့်။ အေးမြက သူ့အခန်းထဲ လက်ဆွဲခေါ်သွားပြီး ကုတင်ပေါ်တွင် ပက်လက်ကလေးလှဲချပြီး ပေါင်လေးစိကာ လက်လှမ်းကြိုရှာသည်။ထွေးပိုက်ရင်းနှင့် နို့တွေစို့ပြီး အဖုတ်ဝသို့ လီးတေ့ကာ ဖိထိုးကြည့်သည်။ မရ ။ ” အား…ဇွဲမာန် နာတယ်” “အေး ခဏလေးပါ” တဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဖိထိုးကာ ဝင်သလောက်ကို အသွင်းအထုတ်လုပ်ရင်း တအိအိနှင့် လီးတဝက်ခန့်ရောက်လာပြီ နှစ်ယောက်လုံး ဆန္ဒတွေပြင်းနေသော်လည်း ခက်ခဲလှသည်။
နှုတ်ခမ်းလေးနမ်းရင်းနှင့်ပင် အဆုံးထိရောက်အောင်သွင်းလိုက်ပြီး အသွင်းအထုတ် ကို အသာယာလေးလုပ်ပေးနေလိုက်သည်။ ကျပ်တည်းလှသော အေးမြရဲ့ အဖုတ်တွင်းကလည်း အတွေ့ထူးကိုပေးနိုင်လှသောကြောင့် ကျနော့မှာလဲ ထိန်းသိမ်းရပင်ပန်းလှ၏။ အရမ်းလည်းမကြမ်းရဲ။ အေးမြလည်းနာသွားနိုင်သလို ကျနော်လည်းပြီးသွားနိုင်သည်။ စိတ်ကိုအနိုင်နိုင်ထိန်းရင်း ဖြည်းဖြည်းပင်လိုးနေလိုက်သည်။ နို့တွေစို့ရင်း နှုတ်ခမ်းလေးနမ်းရင်းပေါ့။ “အ့ အ့ ဇွဲမာန် အရမ်းကျပ်တယ်ဟာ နာလိုက်တာ” “အင်းပါ အေးမြရယ် ခဏပဲ သည်းခံနော်” “နင့်ကို ချစ်လွန်းလို့နော် သိလား” “အင်းပါ ငါနဲနဲမြန်ကြည့်မယ်နော်” “အင်း အ့ အ့ ” “အေးမြ နာသေးလား” “အရမ်းမနာဘူး ရတယ် လုပ်” “အင်း” အတိုင်အဖောက်မညီစွာနှင့်ပင် အေးမြလေး ဟိုးအမြင့်ကြီးကနေပြုတ်ကျသလို လေဟုန်စီးခဲ့ရသည်။ အေးမြလေးပြီးတော့ ကျနော့ကို အတင်းကုတ်ဖက်တက်ရင်း အဖုတ်ကလည်း လီးကိုတအားညှစ်ထားသည်။ ညှစ်ထားတဲ့အချိန် တဆုံးလိုးပေးလိုက်ရာ အေးမြလည်း ကော့တက်သွားပြီး ကျနော်လည်း အေးမြအဖုတ်ထဲ အရေများပန်းထည့်ကာ နှစ်ယောက်သားဖက်ရင်း မှိန်းမောနေလိုက်ကြသည်။ ” ထ ဇွဲမာန် ပြန်ဖို့လုပ်တော့ ၃ နာရီထိုးတော့မယ် အဖေတို့ပြန်လာတော့မယ် နင်ကားဂိတ်ဘယ်ချိန် သွားမှာလဲ” “၅ နာရီခွဲလောက်မှသွားမှာပါ” “အဲ့ဒါဆို ပြန်တော့လေ ငါ့ကိုမမေ့နဲ့နော် ဇွဲမာန်” မျက်ရည်လေး စမ်းစမ်းနှင့်မှာရှာသည်။
ကျနော်လည်း အဝတ်တွေပြန်ဝတ်ပြီး နှစ်ယောက်သားဖက်ကာ နမ်းကြပြန်သည်။ “သွားတော့ အရမ်းနောက်ကျနေမယ် ငါလွမ်းနေတာ မမေ့နဲ့နော်” “အင်းပါဟာ စာရေးနော် အေးမြ” “အင်းပါ ငါကျောင်းရောက်လို့ အဆောင်သိရရင်လည်း လိပ်စာပို့လိုက်မယ် ငါ့ဆီစာမှန်မှန်ပို့နော်” ပြောရင်းနဲ့ငိုကျန်ခဲ့သော အေးမြကို ကျောခိုင်းပြီး စက်ဘီးလေးတွန်းကာ အိမ်ပြန်ခဲ့သည်။ ရင်ထဲက လွမ်းဆွတ်မှုတွေက ထိုအချိန်က နှိုင်းစရာမရှိခဲ့။ အိမ်ရောက်ပြင်ဆင်ပြီး ကားဂိတ်ဆင်း ။ လိုက်ပို့ကြသော သူငယ်ချင်းများ ဆွေမျိုးများကို နှုတ်ဆက်ရင်း သားအမိနှစ်ယောက် ကားပေါ်တက်နေရာယူကြသည်။ “သား…ဟိုမှာ..” အမေညွှန်ပြရာကြည့်လိုက်တော့ ဟင် အေးမြ အဝေးကနေ ငေးကြည့်နေပါလား ကားမှန်ကို နောက်သို့ ဆွဲကပ်လိုက်ပြီး အေးမြမြင်အောင် လက်ပြလိုက်သည်။ တဖြည်းဖြည်း နှင့် အေးမြအရိပ်ကလေးမှုန်ဝါးပျောက်ကွယ်သွားတာ ၂၀၀၂ ခုနှစ်ကနေ အခုထိပါပဲ တခါမှပြန်မတွေ့ရတော့ပါဘူး။ တခါတရံအမေ့ဆီက သတင်းအချို့ပြန်ကြားနေတာက လွဲလို့ပေါ့…။ “မဆုံနိုင်ပြီလား…ဘဝတွေက…နှလုံးသားနုနုအပျံသင်ခါစအရွယ်..ပုံပြင်ဟောင်းလေးတပုဒ်…ရင်မှာရှိခဲ့တယ်.. လွယ်အိတ်တလုံးပခုံးထက်မှာ…အပျော်ဆုံးကျောင်းတက်ချိန်… ငါတို့ကျောင်းသားဘဝ……………” ကြိုးစားပါဦးမည်။